Fitaovana – Page 2 – Tambajotram-Pivavahan'ny Papa Maneran-tany – MADAGASIKARA
Catégorie : Fitaovana
Mba hahazo fanampiana sy fanohanana amin’ny ezaka ataony anie ireo te hiala amin’ny filàna mangeja isan-karazany. Anisan’ny loza lehibe mandrava sy manapotika ny fiainan’ny olombelona ny fahazaran-dratsy izay miteraka filàna mangeja, mitondra mankany amin’ny fiankinan-doha. Rehefa tsy voafehy intsony mantsy ny filàna ao anatin’ny saina amam-batan’ny olombelona ao, dia mitarika azy ho any amin’ny fiankinan-doha …
Fanolorana ny andro, TPPM
« Mba haharitra amin’ny fiainana ny Evanjely sy hihamatotra anie ny fiombonan’ny Eglizy any Chine ». Mitodika manokana amin’ny Eglizy any Chine ny fangatahana ampanaovin’ny Papa antsika kristianina mandritra ity volana Marsa ity. Ny Eglizy any Chine izay tsy nitsahatra ny nandalo sedra sy fahasahiranana nandritra ny taona maro ka mandraka ankehitriny. Ara-tantara tokoa manko dia mizara …
Toy izao indray àry ny Taridalana ho an’ny Vavaka hasiviam-bolana mandritra ny volana Febroary sy Marsa 2020 izao. Ny Dingana fahatelo sy fahefatra ao amin’ny « Lalan’ny Fo » no hodinihina sy hiainana ary hifampizarana. Ny fomba hanatanterahana ny vavaka dia toy ny teo aloha ihany. Toy izao manaraka izao : Hiezaka ny Ekipa fototra iray mba tsy …
FET 100 taona, vavaka
Mba hohenoina sy hoheverina anie ny tarainan’ireo mpifindra monina vokatry ny fanondranan’olona mamoafady satria mbola mpiray tampo amintsika izy ireo. Anisan’ny mampiavaka ny Papa François amin’izao fitondrany sy fiahiany am-panahy ny Eglizy izao, amin’ny alalan’ny fampianarana ataony, ny fanentanana sy fampirisihana ny kristianina sy ny tsara sitrapo rehetra, indrindra ireo manana andraikitra manokana amin’ny …
Hafatry ny Papa, TPPM
Arahabaina isika nankalaza tao anatin’ny hafaliana sy fanantenana ny ivon’ny Taon-jobily faha 100 taona iny. Mitohy hatrany ny fiainantsika ny Taon-jobily. « Mirosoa amin’ny lalina kokoa hatrany ». Hamafiso amin’ny fiainam-bavaka sy ny fiainam-panahy ireo fiomanana isankarazany hoenti-miatrika ny Kongresy Eokaristika hatao any Antsiranana amin’ny 26 – 31 Aogositra 2020. Hiombom-bavaka amin’ny alalan’ny vavaka hasiviam-bolana isika manomboka …
FET 100 taona, Kongresy Eokaristika
Mba hataon’ny firenena tsirairay ho laharam-pahamehana anie ny hoavin’ny ankizy, indrindra ireo mijaly Mifototra indrindra amin’ny hoavin’ny ankizy ny fangatahana ampanaovin’ny Papa mandritra ity volana ity. Manentana ny vita Batemy rehetra tsy ankanavaka izy amin’izany hiombom-bavaka aminy amin’ny Fanolorana atao isan’andro, amin’ny Fo Jesoa be fitiavana, « mba hanao ho laharam-pahamehana ny hoavin’ny ankizy ny firenena …
Fangatahana ampanaovin’ny Papa Ray Masina – novambra 2019
Mba hanjaka any Proche-Orient, izay faritra misy ireo samihafa finoana maro miara-monina anie ny fifanakalozan-kevitra, ny fifampizaràna ary ny fampihavanana. Fandrentsika matetika amin’ny haino aman-jery sy ny fampahalalam-baovao isan-karazany i Proche Orient izay faritra malaza sy manan-tantara eo anivon’izao tontolo izao, na eo amin’ny lafiny toekarena sy fandriampahalemana izany, na eo amin’ny ara-pivavahana. Tsara ihany …
Fangatahana ampanaovin’ny Papa Ray Masina – oktôbra 2019
« Mba hahazo aim-baovao avy amin’ny Fanahy Masina anie ny asa fitoriana ao amin’ny Eglizy » Afantoky ny Papa Ray Masina amin’ny asa fitoriana eo anivon’ny Eglizy ny fangatahana iarahan’ny vita Batemy rehetra manandratra, amin’Ilay Andriamanitra Ray be fitiavana, mandritra ity volana ity. Ity volana Oktôbra ity tokoa mantsy no natokan’ny Ray Masina hiombonam-bavaka manokana amin’ny Eglizy …